जनसम्पर्क समितिका नाममा यस्ता धन्दा – BRTNepal
जनसम्पर्क समितिका नाममा यस्ता धन्दा
ध्रुब कुवर २०७५ वैशाख २ गते ८:४८ मा प्रकाशित
नेपालीमा उखान छ, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन । यो उखान ठ्याक्कै चरितार्थ भएको छ अहिले जनसम्पर्क समितिमा । अमेरिकामा रहेका सबै सङ्घसंस्थामा आफ्नो बोलवाला चल्छ भन्दै एनआरएन अमेरिकासँग जुँगाको लडाई गर्दाको हुँङकार लत्रँदै गएर जनसम्पर्क समितिका नेताहरू अहिले मसान घाटको रात्रीकालिन डन बन्न पुगेका छन् । दिउसो मुख देखाएर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दासम्म पनि चेत नखुलेकाहरुलाई यो लेखले पो बिउझ्याउछ कि सायद ! जनसम्पर्क समितिको काम र कर्तव्यको बारेमा सबैलाई थाहा छ । यसको नामनै काफी छ । तर नाम आनुसारको काम आहिलेसम्म के के भयो ? यसको जवाफ आउला , भूकम्पका नाममा यसो गरियो उसो गरियो । बनभोज, भाषण र सम्मानका काम कति कति ।
तर प्रवासमा आएर विभिन्न कारणले दुख पिडा भोग्ने नेपालीका लागि मलम बन्न सक्नु पर्थ्यो । कानुनी सहायता खोज्नेहरुलाई लुट्ने र धुत्ने होइन इमान्दार भएर सहयोग गर्नु पर्थ्यो । नेपाली भाषा संस्कार र संस्कृति यहाँ हुर्कँदो नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित शाखा भएका सबै राज्यमा काम हुनु पर्ने थियो । अङ्ग्रेजी भासको कमजोरीले स्वास्थ्य बिमा, रोजगारी र सिपका क्षेत्रमा काम गर्न साह्रो गाह्रो भएकालाई सहयोग गर्नु पर्ने थियो । आपत्कालीन कोष खडा गरेर विपदमा सहयोग गर्नु पर्ने थियो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जनसम्पर्क समितिका नेता भनाउदाहरुमा लुट्ने र झोले हुने बाहेक कुनै गुण देखिएन । केवल नेताहरूको चाकडी र निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न बाहेक उनीहरू लागेको भेटिँदैन ।
तपाइहरू आफै भन्नुस् नाम अनुसारको काम नभए जनसम्पर्क समितिको अस्तित्व नै कहाँ रहन्छ । एक अर्कालाई खुइल्याउन प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने , भरौटे र धुपौरेहरुलाई अगाडि लगाएर लाजमर्दो खेल खेल्ने । अनि प्रवासी नेपालीको हितमा काम हुन्छ ? एकथरी समयमा अधिवेशन गर्नै नचाहाने यही बहानामा अर्कोथरी नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र काट्न लगाएर लखेट्ने ।
यस्तो घिनलाग्दो खेल भएको दशकौँ भयो कहिले सुध्रनु हुन्छ अव ? काम चाही किर्ते र जाली गर्ने तर राम्रो र मिठो भाषण गरेर ठुला सपनामा भुल्याउनेहरुहो अव कति दिन यस्तो गर्छौ ।
प्रसङ्ग थोरै बदलौँ जनसम्पर्कले पहिला नै सुरु गर्नु पर्ने काम एन आर एन अमेरिकाले सुरु गरेको छ । यो कति दिगो र प्रभावकारी हुन्छ पछि विश्लेषण गरौँला । तर हेल्प डेस्क खोलेर एनआरएन अमेरिकाले आहातमा रहेकालाई केही राहात दिन प्रयास भने गरेको छ । जनसम्पर्क जस्तै खिचातानी र फोहोरी राजनीतिको दलदलमा नपरेको भए एनआरएन अमेरिकाले यस्ता धेरै राम्रा काम गर्न सक्थ्यो । तर थिलथिलिएको एनआरएनले राहत र सेवाका क्षेत्रमा अरू ठोस काम गर्ने अवस्थै छैन । एनआरएन अमेरिकाका रोचक अनि घोचक नाली बेली पछि प्रस्तुत गरौँला ।
तर अहिले जनसम्पर्क समिति तिरै फर्कन चाहन्छु । दश गाउँ दुर्गन्धित बनाउने सिनो भन्दा पनि बढी दुर्घन्धित कसरी भयो जनसम्पर्क समिति भन्ने बुझ्न केही सत्य घटनाहरू उजागर गर्नु जरुरी हुन्छ । जनसंपर्कको नाममा टाउको देखि पुछार सम्मका (तर सबै होइन) ले के कस्ता काम गर्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
यो पंक्तिकारसँगै ठोकिन आइपुगेको एउटा घटना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । अमेरिका आएकी एक जना महिलाको जनसम्पर्कका एक जना नेतासँग भेट भयो । अमेरिका बसोबास गर्न आवश्यक सवैकुरा सहयोग गर्ने बचन दिए । त्यही प्रलोभन दिएर दुई वर्षसम्म यौन शोषण गरे । काम भने केही गरेनन् ।
एक दिन मेरो सम्पर्कमा आएकी उनले नालीवेली सुनाइन । उनलाई लेटर प्याडमा चिठी बनाइदिने , स्टेटमेन्ट तयारी गरिदिने लगायत नाना थरीका कुरा गर्दै कोठामै गएर यौन शोषण गर्ने गरेका रहेछन् । उनको कागज पत्र केही बनेको छैन । २ वर्षसम्म उनलाई गुमाराहामा राखेर काम नगर्ने ती नेता अहिले पनि जनसंपर्कको राजनीतिमा छदैछन् ।
अरू कसैको सहयोगमा ती महिलाको आवश्यक काम बन्यो । इन्टरभ्यू भयो । उनको पक्षमा नतिजा आयो । केही समय पछि श्रीमान् र छोरा छोरी अमेरिका आए । आनन्दको जीवन सुरु भएको केही समयमा नै अर्को विपद आइलाग्यो । उनीसँगको शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा जनसंपर्कका ती नेताले साथीभाइलाई सुनाउँदा उनका श्रीमानको कानमा पर्‍यो । श्रीमान् अलगिने भए । छोराछोरी सहित श्रीमानले छोडेर हिँडेपछि उनको जिन्दगीमा ठुलो वज्रपात भयो ।
अमेरिकामा बस्न चाहाना गर्नेहरुको कामजोरीको फाइदा उठाउँदै कतै वकिल मेटाउने त कतै जनसंपर्कका अगुवाहरुको यौन प्यास र पैसाको धन्दा चलेको छ । राम्रो काम गर्ने कानुन व्यवसायी र जन सम्पर्कमा नै बसेर पनि राम्रो गर्न प्रयास गरिरहेकाहरुलाई यस्ता केही खराब व्यक्तिहरूका कारण समाजमा मुख देखाएर हिँड्न गाह्रो हुने अवस्था बन्दै गएको छ । अव संस्था र कसैको व्यवसायलाई दोषी देखाउनु भन्दा पनि खराब काम र प्रबृतिलाई नंग्याउनु पर्छ । जय नेपाल